Sheekh Xassan Dahir oo diiday Qodobo dan ugu jirto ay hor dhigtay Dowlada Somalia. (Warbixin Xasaasi ah). | Salaan Media
Sheekh Xassan Dahir oo diiday Qodobo dan ugu jirto ay hor dhigtay Dowlada Somalia. (Warbixin Xasaasi ah).
Ugu dambeyntii, Xaaladda Sheekh Xassan dahir, ayaa marba marka xigta sii fogaaneyso isagoona xumeeyay Calaaqaadkii u dhexeeyay Dowlada iyo Beesha Habar Gidir Walow Beesha ay kasii niya jabeyso ad adeega Xassan dahir.